စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ထူးချွန်စွာ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့ အောင်မြင်တဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖော်အယ်ထား
June 15, 2019 Cele Love 0
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ထူးချွန်စွာ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့ အောင်မြင်တဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖော်အယ်ထား နော်ဖောအယ်ထားက လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေကြောင့် လူသိများခဲ့တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး တစ်ယောက်ဖြစ် ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့အလှကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ကမ်း လှမ်းခံခဲ့ရတာပါ ။ သူ့ရဲ့အလှတွေကတော့တစ်နေကုန်တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်ရင်တောင်ကြည့်မဝနိုင်တဲ့အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မိန်းကလေးအချင်းချင်းတော်ကြွေရလောက်တဲ့အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။ […]
အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် အချစ်တတ်ဆုံး၊ အရူးအမူး အဖြစ်ဆုံး ရာသီခွင် (၆)ခု
အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် အချစ်တတ်ဆုံး၊ အရူးအမူး အဖြစ်ဆုံး ရာသီခွင် (၆)ခု အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရူးအမူးဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေ ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုချစ်မိပြီဆို အသည်းအသန်တွေဖြစ်ပြီး စားလည်း ဒီစိတ်၊သွားလည်း ဒီစိတ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေ၊ ချစ်သူကို အစစအရာရာဦးစားပေးအနစ်နာခံပြီး ချစ်တတ်တဲ့သူတွေကို မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို အချစ်ကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့သူတွေ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အရူးအမူးဖြစ်နေတဲ့သူတွေက ဘယ်ရာသီဖွားတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ […]
၁၆.၆.၂၀၁၉ မှ ၂၃.၆.၂၀၁၉ ထိ (၇)ရက်သားသမီးများ ဟောစာတန်း….
၁၆.၆.၂၀၁၉ မှ ၂၃.၆.၂၀၁၉ ထိ (၇)ရက်သားသမီးများ ဟောစာတန်း…. မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဇွန်လ ၁၆ ရ က်နေ့မှ ဇွန်လ၂၃ ရက်ေ န့အထိကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ […]
အဒေါ်ရယ် အဒေါ့်တူမလေး မင်္ဂလာဆောင်လို့ ပျော်ပျော်နေရင်းနဲ့ ဖြစ်သွားတာ ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလဲ ….
အဒေါ်ရယ် အဒေါ့်တူမလေး မင်္ဂလာဆောင်လို့ ပျော်ပျော်နေရင်းနဲ့ ဖြစ်သွားတာ ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမလဲ …. အဒေါ်ရယ် အဒေါ့်တူမလေး မင်္ဂလာဆောင်လို့ ပျော်ပျော်နေရင်းနဲ့ ဖြစ်သွားတာ ဘယ်လိုဖြေသိမ့် ရမလဲနော် …။ သေခြင်းတရားကလဲနော် ဘယ်ချိန်ဘယ်မှာနေရာမရွေးပါလားနော် အဒေါ်ကံကောင်းတယ်ပြောရမာဘာမှမခံစားလိုက်ရဘူး …။ တူမ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ရယ် မောနေရင်း ရုတ်တရက်လဲ […]
အကြောလည်းပြေ အဆီလည်းကျပြီး အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ အကြောလျှော့နည်းများ
အကြောလည်းပြေ အဆီလည်းကျပြီး အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ အကြောလျှော့နည်းများ တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောတွေပြေလျော့စေဖို့အတွက် နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ ဆန့်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေသိပ်ပြီး မလုပ်ဖြစ်ရင်တောင် မှန်ကန်စွာ ဆန့်ပေးခြင်းဟာ အကြောတွေကို ပြေလျော့စေရုံသာမက အဆီပိုတွေကိုလည်းကျစေပြီး သွယ်လျသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အိမ်မှာတင် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ ဆန့်နည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညစဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အရွယ်တင်နုပျိုပြီး အဆီကျသွယ်လျသွားမှာဖြစ်ပါတယ် နော် […]
အလိမ်အညာစကားတွေ ဘယ်တော့မှ ပြောလေ့မရှိတဲ့ ရာသီခွင် (၃)မျိုး
အလိမ်အညာစကားတွေ ဘယ်တော့မှ ပြောလေ့မရှိတဲ့ ရာသီခွင် (၃)မျိုး လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ရာသီခွင်တွေက လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ မွေးဖွားတဲ့ ရာသီခွင်တွေအရ ဘယ်သူတွေက လိမ်ပြောဖို့ ၀န်လေးတတ်ပြီး အမှန်ကိုပဲပြောတတ်တဲ့သူလေးတွေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အလိမ်အညာစကားတွေ အပြောနည်းဆုံး ရာသီခွင်သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် ဟုတ်ရဲ့လား မေးကြည့်လိုက်ပါအုံးနော် ….. (၁) ပြိဿရာသီဖွား […]
Crush ဆီကနေ သေချာပေါက် “reply” ပြန်လာနိုင်စေမယ့် မက်ဆေ့ခ်ျပို့နည်းများ
Crush ဆီကနေ သေချာပေါက် “reply” ပြန်လာနိုင်စေမယ့် မက်ဆေ့ခ်ျပို့နည်းများ သင့်အနေနဲ့ ရုတ်တရက်ကြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြွေသွားတဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းမယ်။ သူနဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်၊ သူသတိထားမိအောင် သူရဲ့ပို့စ်လေးတွေကို react တွေလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် သူ့ကို မက်ဆေ့တွေ ပို့မှာပေါ့။ တခြားဟာတွေ လုပ်နေတုန်းက […]
ကုသိုလ်​ရပါတယ်​ များများမျှ​ဝေ​ပေးကြပါ ကင်ဆာကို သတ်တဲ့ အရွက်
ကုသိုလ်​ရပါတယ်​ များများမျှ​ဝေ​ပေးကြပါ ကင်ဆာကို သတ်တဲ့ အရွက် ကင်ဆာသတ်နိုင်တဲ့ သင်္ဘောရွက်ပါရောဂါ အတော်များများအတွက် အသုံးဝင်ပုံများကို (ထပ်မံ ဖြည့်စွက် တင်ပြပေးထားပါတယ်) မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တချိုသော မိသားစုဝင်တွေဟာ ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ခပ်စိတ်စိတ် ကြားလာရတာများတော့ကင်ဆာလူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် တစိတ်တပိုင်းအထောက်ကူဖြစ်တဲ့ တင်ပြီးသားပို့စ်ကို ပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပဲ […]
“ကလေးအသံဆူလို့ ရေနွေးပူနဲ့ လောင်းပက်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် (ရုပ်သံ)” စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ ရင်ခွင်ပိုက်အရွယ် ကလေးလေးတစ်ယောက် ဆူညံအောင် လုပ်နေတာကို နားမခံနိုင်တော့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ရေနွေးပူကို ပန်းကန်လုံးထဲထည့်ကာ ကလေးရှိရာနေရာကို သွာပြီး ရေးနွေးပူနဲ့ ပက်ခဲ့မှုတစ်ခု ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ တရုတ်နိုင်ငံ […]
အသက်ရှင်ဖို့ ကျောက်ကပ်လိုအပ်နေတဲ့ သားနှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ် မိခင်တွေဟာ သားသမီးတွေကို အလွန်ချစ်ကြပါတယ်။ သားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ဘ၀ကို အဆုံးရှုံးခံနိုင်တဲ့အထိချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ရပ်ကတော့ မိခင်တစ်ယောက်အတွက် အလွန်စိတ်ထိခိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သားနှစ်ယောက်လုံးကို ချစ်တဲ့မိခင်တစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုသာ အသက်ရှင်ဖို့ရွေးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့အတွက်ဘယ်လောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ […]